Ndiri kuona dambudziko riri kuuya pamusoro penyika. uye mabara, makereke nehurumende zvakavharwa.
Denda richarova New York City, uye rova ​​iro guta kuti harina kuzombozungunuswa pamberi.
Chiporofita naDavid Wilkerson 1986
Ndiri kuona dambudziko riri kuuya pamusoro penyika. uye mabara, machechi nehurumende zvakavharwa. Denda richarova New York City, uye rova ​​iro guta kuti harina kuzombozungunuswa pamberi.
Kurwadziswa kuchachinja vatendi "vasinganamate" kuve minyengetero yekushamisika uye nevaverengi veBhaibheri vanokasira, uye "kutendeuka" kuchave kuchema kwemunhuwari arikuchema mupurupiti.
Kunze kweizvi kunouya "wechitatu kumutsa" uyo uchatsvaira kuAmerica nenyika.
About David Wilkerson David Wilkerson, akaberekwa May 19, 1931 muHammond, Indiana, akashaya Kubvumbi 27, 2011 padhuze neCuney muCherokee County, Texas, aive muparidzi weAmerica.
Achitya nekushushikana kwakasimba uye nekushinyira kwepamoyo mukati meimba yake, yaakatambira panguva yega yekunyengetera ari mumba make, akauya muna 1958 semufundisi mudiki kuNew York kuzoshanda pamwe nevechidiki vanopara mhosva.
Izvi zvakatungamira kuvambwa kwesangano repasi rese reumishinari uye rekuvandudza zvinodhaka Teen Challenge.
Pamusoro peiyo inomiririrwa muChipiyaniso uye maStilettos, anozivikanwa zvakanyanya nekuda kwemashoko ake ehuporofita akasimba uye semutungamiriri wekereke ye Times Square kuManhattan.
Wilkerson akafa mutsaona yemotokari.
Chinyorwa ichi chakauya mushure mekupa zano.